တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ စစ်ထဲဝင်လာတဲ့ ယူကရိန်းဘောလုံးသမားနှစ်ယောက် ကျဆုံး see more… – Alanzayar
တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ စစ်ထဲဝင်လာတဲ့ ယူကရိန်းဘောလုံးသမားနှစ်ယောက် ကျဆုံး see more…
တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ စစ်ထဲဝင်လာတဲ့ ယူကရိန်းဘောလုံးသမားနှစ်ယောက် ကျဆုံး….
ဘောလုံးသမားဘဝကနေ ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကြောင့် စစ်ထဲဝင်လာတဲ့ ယူကရိန်းဘောလုံးကလပ် ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းသားထဲက ဘောလုံးသမားနှစ်ယောက်တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့တယ်လို့ ယူကရိန်း ပြန်ကြားရေးရဲ့ ထွက်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။…
၂၁ နှစ်အရွယ် Vitalii Sapylo နဲ့ ၂၅ နှစ်အရွယ် Dmytro Martynenko တို့နှစ်ယောက်ဟာ ရုရှားရဲ့ကျူး ကျော်စစ်ကို တားဆီးရင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့ကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။….
၂၁ နှစ်အရွယ် Vitalii Sapyloဆိုတဲ့ လူငယ်ဘောလုံးသမားလေးဟာ တတိယတန်းကလပ် Karpaty Lviv အသင်းရဲ့ လူငယ်အသင်းမှာ ဂိုးသမားအဖြစ်ကစားနေရင်း တိုင်းပြည်ရန်ကာကွယ်ဖို့ တင့်ကားတပ်မှူးအဖြစ် ယူကရိန်းစစ်တပ်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။….
ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ(၂၅)ရက် သောကြာနေ့က မြို့တော် Kyiv ကို ကာကွယ်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ ယူကရိန်းပြန်ကြားရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။…
ဒါ့အပြင် ၂၅ နှစ်အရွယ် Dmytro Martynenko ဆိုသူကတော့ဘောလုံးထူးချွန်ဆုတွေပါ ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး ဒုတိယတန်းကလပ် FC Gostomel မှာနောက်ဆုံးဘောလုံးကစားခဲ့ရာကနေ ရုရှားရန်ကာကွယ်ဖို့စစ်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်း မြို့တော်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာ ရုရှားဗုံးတွေကြဲချမှုကြောင့် သူ့မိခင်နဲ့အတူ သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။….
၎င်းတို့နှစ်ယောက်ဟာ ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်း ပထမဆုံးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ ဘောလုံးအားကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ မှတ်ကျောက်တင်ဂုဏ်ပြုခြင်းလည်း ခံခဲ့ကြရသူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။….
တိုငျးပွညျကာကှယျဖို့ စဈထဲဝငျလာတဲ့ ယူကရိနျးဘောလုံးသမားနှဈယောကျ ကဆြုံး…
ဘောလုံးသမားဘဝကနေ ရုရှားကြူးကြျောစဈကွောငျ့ စဈထဲဝငျလာတဲ့ ယူကရိနျးဘောလုံးကလပျ ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျးသားထဲက ဘောလုံးသမားနှဈယောကျတိုငျးပွညျအတှကျ အသကျပေးလှူသှားခဲ့တယျလို့ ယူကရိနျး ပွနျကွားရေးရဲ့ ထှကျပွနျခကျြအရ သိရပါတယျ။…
၂၁ နှဈအရှယျ Vitalii Sapylo နဲ့ ၂၅ နှဈအရှယျ Dmytro Martynenko တို့နှဈယောကျဟာ ရုရှားရဲ့ကြူး ကြျောစဈကို တားဆီးရငျး ယူကရိနျးနိုငျငံအတှကျ အသကျပေးလှူသှားခဲ့ကွတာလို့ ဆိုပါတယျ။…
၂၁ နှဈအရှယျ Vitalii Sapyloဆိုတဲ့ လူငယျဘောလုံးသမားလေးဟာ တတိယတနျးကလပျ Karpaty Lviv အသငျးရဲ့ လူငယျအသငျးမှာ ဂိုးသမားအဖွဈကစားနရေငျး တိုငျးပွညျရနျကာကှယျဖို့ တငျ့ကားတပျမှူးအဖွဈ ယူကရိနျးစဈတပျကို ဝငျရောကျခဲ့တာပါ။…
ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ(၂၅)ရကျ သောကွာနကေ့ မွို့တျော Kyiv ကို ကာကှယျရငျး ကဆြုံးသှားခဲ့ရတယျလို့ ယူကရိနျးပွနျကွားရေးဌာနက သတငျးထုတျပွနျပါတယျ။..
ဒါ့အပွငျ ၂၅ နှဈအရှယျ Dmytro Martynenko ဆိုသူကတော့ဘောလုံးထူးခြှနျဆုတှပေါ ရရှိထားသူဖွဈပွီး ဒုတိယတနျးကလပျ FC Gostomel မှာနောကျဆုံးဘောလုံးကစားခဲ့ရာကနေ ရုရှားရနျကာကှယျဖို့စဈထဲဝငျရောကျလာခဲ့ရငျး မွို့တျောရှိ တိုကျခနျးတဈခနျးမှာ ရုရှားဗုံးတှကွေဲခမြှုကွောငျ့ သူ့မိခငျနဲ့အတူ သဆေုံးသှားခဲ့တာပါ။…
၎င်းငျးတို့နှဈယောကျဟာ ရုရှား-ယူကရိနျးစဈပှဲအတှငျး ပထမဆုံးသဆေုံးခဲ့ရတဲ့ ယူကရိနျးနိုငျငံရဲ့ ဘောလုံးအားကစားသမားတှဖွေဈခဲ့ပွီး ယူကရိနျးနိုငျငံရဲ့ မှတျကြောကျတငျဂုဏျပွုခွငျးလညျး ခံခဲ့ကွရသူတှေ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။….
Previous Article ရေပေါ်ဆီအနုပညာသမားတွေကို ထောင်ကထွက်လာချင်း ပိုင်တံခွန်ဒဲ့ပြောပြီ.aa
Next Article အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးအရင်ဖတ်ကြည့်ပါ ညီမလေး…